Banaan bax lagu taageersanyahay Madaxweyne Axmed Madobe oo Maanta Garowe ka dhacay – SBC
Banaan bax lagu taageersanyahay Madaxweyne Axmed Madobe oo Maanta Garowe ka dhacay
Magaalada Garoowe caasimada Dowlada Puntland Maanta oo Jimce aheyd waxaa ka dhacay Banaan bax ay ka qeyb qaateen bulsha weynta ku dhaqan magaaladaas kaas oo lagu soo dhaweynayay Doorashadii loo doortay Madaxweynaha Maamul goboleedka Cusub ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe.
Dadkan oo aad u tira badnaa islamarkaana isugu jiray Weyn iyo yar, Rag iyo haween waxa ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin una soo dhaweynayaan Madaxweynaha Cusub ee loo doortay Maamulka Jubaland.
Waxa ay ku muujinayeen shucuurtooda dadkan Boorar waaweyn oo lagu soo xardhay Ereyo taageero u ah dowlad goboleedka cusub ee gobolada Jubaland ka curatay, waxayna afka uga dhawaaqayeen Hanoolaato Jubaland, Hanoolaado Madaxweyne Axmed Madoobe.
Waxay Dadkan isugu yimaadeen barxada Caanka ka ah Magaalada Garoowe halkaas oo ay dadkaasi ka soo kala jeediyeen hadalo khiimo badan oo ay ku soo dhaweynayaan Madaxweynaha cusub .
Madaxda Puntland ayaa ka dib doorashadii loo doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe MAdaxweynaha Jubaland saxaafada ka shaaciyay bogaadin iyo hambalyo diiran oo ay taageero buuxda ugu muujinayaan .